I-Aluminium lukathayela webhodi elihlanganisiwe kumele libe namandla wokonga izinsiza kanye nokwehlisa izindleko
I-Aluminium lukathayela webhodi elihlanganisiwe kumele libe namandla wokonga izinsiza kanye nokwehlisa izindleko. Ngokuvamile, ukumbozwa okubili nokumiswa okukodwa (ukumbozwa okubili nokumiswa okubili) noma izinkinga zekhwalithi, ezinjenge-edge enkulu engathí sina, isikhungo esivulekile phakathi, ukumboza okungekho, i-se enkulu ...
Ulwazi iqoqo aluminium plastic esiyinhlanganisela ibhodi
Iphaneli yepulasitiki ye-Aluminium (eyaziwa nangokuthi yibhodi elihlanganisiwe lepulasitiki le-aluminium) yakhiwe ngezinto zokwakheka okuningi. Izendlalelo ezingenhla nezingezansi zingamacwecwe e-aluminium alloy ephezulu, kanti phakathi nendawo ibhodi lomgogodla we-polyethylene (PE) elingenabuthi. Ifilimu evikelayo inamathiselwa ngaphambili. Okwedlula ...
Isingeniso esifushane se-aluminium ipuleti lepulasitiki
I-aluminium ipuleti lepulasitiki yisifinyezo sepuleti elihlanganisiwe lepulasitiki. Umkhiqizo uyipuleti eliyinhlanganisela elinezingqimba ezintathu nepulasitiki njengongqimba oyisisekelo nezinto ezibonakalayo ze-aluminium ezinhlangothini zombili. Ukumbozwa kokuhlobisa nokuvikela noma amafilimu kufakwe ebusweni bomkhiqizo njenge-surfa yokuhlobisa ...